Iwo Seychelles Islands akapfekedza korona yeWTA yeNyika Yese Inonyanya Kudanana
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kuputsa Seychelles Nhau » Iwo Seychelles Islands akapfekedza korona yeWTA Yepasirose Yenyika Inodanana
Awards • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Seychelles Nhau • Hospitality Industry • nhau • Vanodanana Michato Honeymoons • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Iwo Seychelles Islands akapfekedza korona yeWTA Yepasirose Yenyika Inodanana
Inoremekedzwa nerunako rwekunaka, iyo Seychelles Islands yakapihwa iyo Yepasi Pose Kunodakadza Kusvikira kwa2020 muGrand Final yeWorld Travel Award.
Iyo pristine paradiso yakaziviswa semutungamiriri anotungamira wepasirese uyu mubairo zvichitevera mushandirapamwe wegore rese uye nzira yekuvhota neChishanu, Mbudzi 27, 2020.
Chitsuwa ichi chakavaka mbiri yekuve imwe yenzvimbo dzinodakadza nyika, ichikwevera vakaroorana kubva kumativi ese epasi. Zvisina kubatika uye zvakachengetedzwa mune zvechitendero, zviwi zvinoshanda senzira yekuzorora yevakaroora vanoshuva kupukunyuka kunetsa kwehupenyu hwepanyika uye kugadzira kubatana kwakadzama.
Izvi zvishuwo zvakangowanda nedenda razvino sezvo vazhinji vanoona kukosha kwekukoshesa nguva dzese. Iyo yekunopisa yekuenda inopenya pearari, machena mahombekombe ane turquoise mafungu, akakomberedzwa nemakomo akasvibira, ayo anoenderana mune akakwana exotic kutiza kubva kune zvakashata chokwadi.
Mai Sherin Francis, Seychelles Tourism Board Chief Executive vakaratidza kugutsikana kwavo pachiziviso ichi sezvo kuenda kuri kuve mumwe wevakakunda Grand Final kunopa Seychelles kuburitswa kwakawanda uye kuoneka kunodiwa kuratidza runako uye runako.
“Kunze kwezviitiko zvinoyevedza zvekuenda, chikwereti chinofanira kupihwawo kune vatinoshanda navo mumaindasitiri sezvo vainewo ruoko mukugadzira hun'anga nekurangarira kwenguva refu kunouya nezororo kumahombekombe edu. Mubairo uyu kukudzwa kukuru kunopihwa Seychelles neindasitiri yedu yemuno uye kunouya sekurudziro huru munguva dzino dzakaoma, ”vakadaro Mai Francis.
Rudzi rwechitsuwa harungopa chete runako rusina kushatiswa, asi zvakare rwunozvirumbidza nzvimbo dzakawanda uko vazhinji vakaroorana vanosarudza kuzorora kana kusunga pfumo. Uku kusanganisa kusinganisike ndiko kwakasimudzira Seychelles Islands kuenda pachinzvimbo chayo seNyika Dzekusvirana Kwerudo kwe2020.
Iwo maWorld Travel Awards anga achibvuma, achikomborera uye achipemberera kugona kwakanakisa munzvimbo dzese dzakakosha dzemabhizimusi ekushanya, ekushanya uye ekugamuchira vaeni kubvira 1993 nechiratidzo pasi rose chinozivikanwa sechiratidzo chekupedzisira cheindasitiri.
Mhemberero yekupa mubairo, chiitiko chakakosha mukendendari yekufambisa neyekushanya, yakapindwawo nevamwe vanoita sarudzo-vakuru uye vatungamiriri muindasitiri iyi kuwedzera kune vekutengeserana nevatapi venhau.
Kubudirira kunokudzwa kunotevera kuhwina kwekuenda kweiyo Indian Ocean's Inotungamira Sustainable Tourism Destination yegore rechipiri rakateedzana kune iyo 27th yepasirose World Travel Awards. Kubata uye kudanana kunofamba pamwe nekugadzikana sekiyi yekuchengetedza rudo rwechiratidziro cheparadhiso yechitsuwa.
Dzimwe nhau nezve Seychelles
Chorus Aviation Inc. inozivisa kusarudzwa kweVatungamiriri